China Wholesale Glitter Water Activated Magic Adhesive Eyeliner miaraka amin'ireo boaty marika tsy miankina amin'ny orinasa Box Weiti
Volomaso amam-bary manjelanjelatra mampihetsi-po an'ny masom-bolo mametaka amin'ny boaty marika tsy miankina
Penina eyeliner ranon-dronono 1, 2 ao anaty 1
2, tantera-drano sy maharitra
3, ny eyeliner majika antsika dia ho an'ny adhesive fehikibo diso
4, Drafitra vaovao miaraka amin'ny teknolojia adhesive
Penina eyeliner mametaka tena ranoka
Kalocils 2 in 1 Self-Adhesive Liquid Eyeliner dia raikipohy vaovao miaraka amina teknolojia adhesive, adhesive, azo antoka & malefaka, tsy manimba ny masonao, fofona tsara, malama sy voajanahary, tsy tantera-drano ary tsy mahazaka hatsembohana, io no safidy tsara indrindra ho anao. kapoka, omeo traikefa mahatalanjona ianao. Ny Eyeliner-tsika dia sady lakaoly no eyeliner, mitazona mafy ny kapoka, afaka manao volomaso amin'ny eyeliner majika izahay fa tsy lakaoly na eyeliner manitra.
Azo haverina sy mora ampiharina
Mora indrindra ny mametraka kapoka mandritra ny 30 segondra. Tehirizo ny fotoanao ary ataovy tsotsotra ireo dingana. Ny toerana mimanda manafaka anao amin'ny ahiahy sy henatra mandatsaka volomaso. Dingana tsotra 3 apetraka amin'ny volomaso ary mety amin'ny vao manomboka! Ahintsano ny valan-tseranana, avy eo sintomy manaraka ny kofehinao ny kofehy, apetaho amin'ny kapoka. Azo ampiasaina amin'ny karavasy diso.
Ahoana ny fampiharana eyeliner adhesive?
1. Ahintsano ny eyeliner in-10-20 alohan'ny hampiasana azy.
2. Ataovy sary eo am-pototry ny volomaso ny masomaso.
3. Afehezo amin'ny tweezers ny volomaso.
4, Tsindrio moramora ao amin'ny faritry ny maso ny volomaso ary vitao ny anaovany.
Ahoana ny fiasan'ny eyeliner fametahana eyelash?
Ny vokatra dia miasa amin'ny alàlan'ny fametrahana tsipika adhesive milamina sy mazava (sy pigment, raha mampiasa mainty ianao), izay nanjary henjana taorian'ny segondra vitsy. Izay karazana kapoka sandoka dia azo apetraka eo ambonin'ilay tsipika manamarina ny fotaka, izay hipetraka toy ny lakaoly ihany (fa ho antsika izay matetika no iharan'ny fikolokoloana, tsy dia misy rantsan-tànana mikorontana sy mifikitra).
Boaty eyeliner manokana
Manana boaty fonosana eyeliner isan-karazany isika, tranga eyeliner, sns amin'ny tahiry vonona be. Fa kosa, misy serivisy marika manokana natokana ho anay. Raha ny mahazatra, ho an'ny boaty na tranga efa vonona dia manohana ny fanontana UV UV izahay, raha mila endrika sy haben'ny boaty ianao, dia azo atao manokana ihany koa. Ny tokony hataonao dia ny mandefa anay ny sary famantarana sy ny loko tadiavinao. Tena hanao fonosana volomaso tsara indrindra ho anao izahay.
Teo aloha: Lafo mora vidy mora Label Strip manokana mikapoka mpivarotra volomaso 25mm Mink
Manaraka: OEM 2020 Hot Lineran'ny maso malaza tsy miaro amin'ny rano Water Magic Magic Eyeliner Adhesive Glue Pen
Label manokana an'ny eyeliner
Eyeliner nampandeha rano
OEM Factory Bulk Adhesive 2 amin'ny 1 tantera-drano Cus ...
Ligera manokana tsy tantera-drano tantera-drano tsy miankina ...
Volomaso maso, Fanitarana volomaso, kapoka mink, eye liner, Mpivarotra volomaso, eyeliner,